MOA ve tsy zazalahy kely mahafinaritra io? Samoela no anarany. Ary ilay lehilahy mametraka ny tanany eo ambony lohan’i Samoela dia i Ely, mpisoronaben’ny Israely. Izao dia ny fitondran’i Elkana rain’i Samoela sy Hana reniny an’i Samoela ho any amin’i Ely.
Taona vitsivitsy talohan’izao dia nalahelo aoka izany i Hana. Ny antony dia noho izy tsy nanan-janaka, ary tena naniry hanana iray aoka izany izy. Koa indray andro rehefa nitsidika ny tabernakelin’i Jehovah i Hana dia nivavaka hoe: ‘Jehovah ô, aza manadino ahy! Raha manome ahy zazalahy iray ianao, dia mampanantena aho fa hatolotro ho anao izy mba hahafahany hanompo anao amin’ny fiainany rehetra.’
Rehefa nandeha ny taona, dia nanohy nanompo tao amin’ny tabernakelin’i Jehovah i Samoela, ary tian’i Jehovah sy ny olona izy. Nefa tsy tsara ireo zanakalahin’ny mpisoronabe, dia i Hofinia sy Finehasa. Nanao zava-dratsy betsaka izy ireo, ary nanao izay tsy hankatoavan’ny hafa an’i Jehovah koa. Tokony ho nesorin’i Ely tsy ho mpisorona izy ireo, nefa tsy nanao izany izy.
Izany no nolazain’i Samoela rehefa niantso indray i Jehovah. Nilazan’i Jehovah i Samoela tamin’izay fa hanasazy an’i Ely sy ireo zanany lahy izy. Tatỳ aoriana dia maty i Hofinia sy Finehasa, ary rehefa ren’i Ely izay nitranga, dia nianjera nitsilany izy, ary folaka ny vozony ka dia maty koa izy. Koa dia tanteraka ny tenin’i Jehovah.
Nihalehibe i Samoela, ary tonga mpitsara farany teo amin’ny Israely. Rehefa antitra izy dia nanao fangatahana taminy toy izao ny vahoaka: ‘Mifidiana mpanjaka iray mba hanapaka anay.’ Tsy nirin’i Samoela ny hanao izany, satria i Jehovah no mpanjakan’izy ireo, raha ny marina. Nefa i Jehovah dia nilaza taminy mba hihaino ny vahoaka.
Hizara Hizara Manompo An’andriamanitra ny Zazalahy Kely Iray
my tant. 55